Europe N'ókèala With The Best Weather | Save A Train
Home > Travel Europe > Europe N'ókèala With The Best Weather
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 04/10/2020)
Ọ bụ ike ikwu ihe kasị dị ka ihe kasị mma na ndị kasị njọ ihu igwe, n'ihi ya, mgbe anyị na malitere ekewetde Europe N'ókèala na Best Weather anyị amaghị otú ịgakwuru a. Ka emechara, na nke ahụ bụ niile na onye, ọ bụghị ya? Ya mere, anyị kpebiri itinye anyị tesis na na 365 ụbọchị nke anyanwụ, ìhè ikuku na ọ dịghị mmiri ozuzo mmiri ka maka ezigbo ihu igwe, na-amalite na e.
Anyị na-etinye ọnụ a ndepụta nke mba Europe dabere na ha ọnọdụ ihu igwe, na ọ bụ gị ga-ekpebi ebe ị chọrọ ịga ọzọ:
Anyị 1st mba maka Europe N'ókèala na Best Weather bụ: Spain
A Mediterranean ihu igwe, a siri ike iga akụrụngwa, ohere magburu onwe njem, yana dị iche iche igwa na ntụrụndụ, ka Spain mara mma nke ukwuu a dream obodo. Dị na Southwestern Europe, Spain maa mkpa n'ihi na otu onye nke ndị kacha mma anyị hụtụrụla ụgbọ okporo ígwè njem Europe. Spain amụma ihu igwe na-ekpo ọkụ, akọrọ summers na nro, ezo winters. Ebe ọ bụ na Spain bụ otu n'ime ndị kasị mba Europe, ya nwere ihe karịrị otu ihu igwe. Ya mere, i nwere ike na-atụ anya a ihe continental mmetụta idụhe ke akwa Central ala dị larịị: inwe njikere maka na-ekpo ọkụ, akọrọ summers na oyi. Translation: ma ọ bụrụ na ị na- ejegharị ejegharị na-Spain na-eme atụmatụ na-anọ ọnwa ole na ole, weta uwe ịsa ahụ na jaketị.
N'ihi na ndị gị bụ ndị ga kama ịnụ ụtọ 22 ° C na nkezi fọrọ nke nta nile afọ karịa ọsụsọ ya na 35 + ° C degrees, Portugal bụ 1st na Europe N'ókèala na Best Weather. Portugal na nkewa dị ka Csb ihu igwe (okwu a na-ezo aka na ihu igwe Mediterranean); a na-ekpo ọkụ ọnọdụ ooh ọhịa idụhe, na-akọrọ summers, na udu mmiri winters. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè, ahọrọ Portugal n'oge okpomọkụ. The ekpo ọkụ ugbu ọnwa na Portugal bụ July na nkezi okpomọkụ nke 24 ° C, na coldest na otu onye bụ January na 12 ° C. Ị ga-enwetaghị ihe kasị kwa ụbọchị anwụ awa August. Plus, i nwere ike mgbe niile ịgagharị Western Europe ụgbọ okporo ígwè maka kasị mma echiche, n'agbanyeghị nke ihu igwe na ọnọdụ nke ndị mba na ị chọrọ ịhụ.
Ọzọ Mediterranean mba nke ga-ahapụ gị na ịhụnanya na nke akụkụ a nke Europe. Greece bụ ahụkarị nke Mediterranean ihu igwe. Njem nleta na obodo hụrụ ya n'anya n'ihi na ya na-ekpo ọkụ ma na akọrọ summers, nwayọọ na ezo winters, na ogologo oge nke anwụ ndị dị afọ. Greece bụ nnọọ otu n'ime ndị Europe N'ókèala na Best Weather na ị ga-aga na ihe karịrị otu ugboro ka ịghọta na ya mara mma. Ekwu okwu nke zuru okè Mediterranean ihu igwe, ọ bụ naanị mma anyị kwuru Italy kwa, ezie na ya n'oge okpomọkụ ifufe nwere ike mee ka ọkụ nke ukwuu, wetara weather bụghị onye ọ bụla na-arụ.
Ọ bụ ezie na nnọọ ọmarịcha architecturally, mbụk na ọdịbendị, Britain abụghị otu n'ime Europe N'ókèala na Best Weather. Ọfọn, ma ị na-enwe mgbe nile foogu, mmiri ozuzo, ígwé ojii na nke ukwuu isi awọ na ị na-echefu ihe ndị ọzọ na agba anya dị ka. The dee mmiri ikuku na ya n'ozuzu ya unpredictability adịghị aka ma. Mgbe Britain nwere anwụ na-acha ịtụnanya ebe a na-, anyị nye ndụmọdụ gị ka ị ghara (mgbe!) pụọ enweghị nche anwụ na a mapụtara T-uwe elu. Lelee ndị a 4 ụgbọ okporo ígwè eme njem tupu njem dị mkpa na Europe tupu ị na-aga na gị na njem.
Eleghị anya, otu n'ime ihe ndị kasị pụtara mba Europe, Iceland prides na ya breathtaking fjords, adịghị agwụ agwụ emerald green Okirikiri, snow-ọcha ọnụ ọnụ ugwu, ma ikpọ waterfalls. Oh, , ka anyị ghara ichefu ya gigantic kpụkọrọ, iyi dị ọkụ na geysers, na ụfọdụ ndị friendliest, ndị ụwa! Otú ọ dị, dị mwute ikwu na, a Scandinavian mba bụ aha ọjọọ n'ihi na ya na-ejighị n'aka na mkpari weather. Iceland nwere ihe dị ka 320 ụbọchị nke oké isi awọ n'ígwé ojii, 215 ụbọchị nke mmiri ozuzo, snowstorms, na blizzards. Ọ bụghị maka ndị na-achọ na-enwe a anwụ na-acha vacay.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-a onye nke oyi ememe, Iceland ga-abụ n'elu nke gị na ndepụta nke Europe N'ókèala na Best Weather.
Chọta ọkacha mmasị gị Europe N'ókèala na Best Weather maka ị! ma na-enwe gị na njem! Na-ahọrọ a ụgbọ okporo ígwè na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè na Zọpụta a Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-countries-best-weather/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#britian #coldweather #greece #hot #hotweather #iceland #unitedkingdom #weather travelportugal Njem